Godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaaksan Araddaa kululoo keessatti Humnoonni addaa naanoo somaalee – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGodina Harargee Bahaa Aanaa Cinaaksan Araddaa kululoo keessatti Humnoonni addaa naanoo somaalee
BBS: Fuulbana 8/2020 Godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaaksan Araddaa kululoo keessatti Humnoonni addaa naanoo somaalee dhukaasa bananiin Namoota 6 battalumatti yoo ejjeesan namoonni 2 ammoo madaahun himame.
Namoota lamaan madaayan keessaa takka dubartii yeroo taatu, ishiinis ganama har’aa lubbuun dabaruu jiraattonni himan.
Taaten kun kan raawwatame Halkan edaa sa’aa 3:30 irratti tahuun jiraattonni himan.
Akka jiraatan aanaa cinaaksan tokko BBS tti himetti, humnoonni Addaa Naannoo somaalee kun, RIB kan araddicha maadheffate waliin walii galuun gochaa kana raawwatan.
Namoonni ajjeefaman kunniin waggaa 3 dura Shira Abdii Illee fi Wayyeen xaxxeen kanneen daangaa irraa buqqafamanii Aanaa Cinaaksan keessa qubatanii turan, erga Jijjiiramni dhufe je’ame booda Bulchiinsi Harargee Bahaa Daangaa irratti Araddaa kululoo keessatti deebisaanii qubsiisuu dubbata.
Humnoonni Addaa naannoo Somaalee tarkaanfii bifa kanaa fudhachuun isa duraa tahuu baatus, Shira RIB wajjiin tahanii nurratti hojjataniidha je’a namni kun.
RIB yeroo Hawaasani Oromoo tarkaanfii fudhachuuf ka’e, Nuutu biyya eegaa isin taa’aa je’anii hawaasa keenya Uggaran je’a. RIB Araddicha Qubsiifame Dubartoota Saba Biraa of jalaa waan qabaniif Gara Hidhattoota naannoo Somaalee loogan je’a.
Namoonni Halkan Edaa ajjeefaman Hundi hanga ammaa hin awwaalamne kan je’u namni kun, yeroo ammaa reeffi isaanii Gara Cinaaksan fidamanii jiru je’a.
Sababa ajjeechaa halkan edaa raawwatameen, Haalli Aanaa Cinaaksan keessa jiru ulfaataa tahuu kan dubbatu namni kun, RIB yeroo ammaa Hawaasa nagayaa Reebuu fi Hidhuu itti fufan je’a namni odeeffannoo nuuf kenne kun.
“Shawaa Kibba Lixaa, Diilallatti daandii cuftan jedhanii qeerroo irratti dhukaasanii akkasitti madeessan.